Wednesday, April 6, 2022 Tọzdee, Eprel 7, 2022 Douglas Karr
Ka ị na-atụgharị na mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ webụsaịtị, ị ga-abịarutekarị ụfọdụ eserese ozi haziri mara mma nke na-enye ntụle nke isiokwu ma ọ bụ gbarie ọtụtụ data ka ọ bụrụ ọmarịcha, otu eserese, nke etinyere n'ime akụkọ. Nke bụ eziokwu bụ… ndị na-eso ụzọ, ndị na-ekiri, na ndị na-agụ akwụkwọ hụrụ ha n'anya. Nkọwa nke infographic bụ naanị na… What is An Infographic? Infographics bụ ihe ngosi onyonyo eserese nke ozi, data, ma ọ bụ ihe ọmụma ezubere iweta
Mgbe m nụrụ ka mmadụ na-ekwu okwu backlink dị ka akụkụ nke atụmatụ ahịa dijitalụ n'ozuzu, m na-enwekarị mgbagwoju anya. Aga m akọwa ihe kpatara site na post a mana achọrọ m ibido na akụkọ ụfọdụ. N'otu oge, engines ọchụchọ na-abụbu akwụkwọ ndekọ aha buru ibu nke a rụrụ ma nye iwu dị ka akwụkwọ ndekọ aha. Algorithm Pagerank nke Google gbanwere odida obodo nke ọchụchọ n'ihi na ọ na-eji njikọ gaa na ibe ebe a na-aga dịka ibu dị mkpa. A